लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
एउटी सानी केटीले कारखानाको चिम्नीबाट धुवाँ आएको र त्यो धुवाँबाट बाक्लो बादलजस्तै केही बन्दै गरेको देख्छिन्‌। उसलाई सबै बादल कारखानाले नै बनाउने रहेछ भन्ने लाग्छ। सानो बच्चाले यसरी बुझ्दा हामीलाई हाँस उठ्‌न सक्छ। तर कुनै गम्भीर विषयमा हाम्रो बुझाइ फरक पऱ्यो भने यसले जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। जस्तै: कुनै औषधीमा लेखिएको विवरण गलत तरिकाले बुझ्दा यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।
आध्यात्मिक विषयमा गलत बुझाइ छ भने यो झनै खतरनाक हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, कुनै-कुनै मानिसले येशूको शिक्षालाई गलत तरिकामा बुझे। (यूहन्ना ६:४८-६८) येशूले सिकाउनुभएको शिक्षाको अर्थ बुझ्न खोज्नुको सट्टा तिनीहरूले उहाँको कुरा सुन्नै चाहेनन्‌। कस्तो दुःखलाग्दो कुरा!
के तपाईं डोऱ्याइ पाउन बाइबल पढ्‌ने गर्नुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाईं प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। तर बाइबलको कुनै-कुनै शिक्षा तपाईंले गलत तरिकामा पो बुझिरहनुभएको छ कि? थुप्रैलाई यस्तै भएको छ। मानिसहरूले गलत तरिकामा बुझेको ३ वटा कुरा विचार गरौं।
कसै-कसैले “परमेश्वरको भय राख्” भन्ने बाइबलको आज्ञालाई गलत तरिकाले बुझेका छन्‌। उनीहरूको विचारमा यो वाक्यांशको मतलब हामी परमेश्वरसँग एकदमै त्रसित हुनुपर्छ भन्ने हो। (उपदेशक १२:१३) तर परमेश्वर आफ्ना सेवकहरू यसरी त्रसित भएको चाहनुहुन्न। बरु उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: “नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु। म तँलाई सहायता गर्नेछु।” (यशैया ४१:१०) परमेश्वरको भय राख्नुको मतलब उहाँप्रति श्रद्धाभाव राख्नु र उहाँको गहिरो आदर गर्नु हो।
के यो पृथ्वी आगोद्वारा नाश हुनेछ?
कोही-कोहीचाहिं बाइबलका यी शब्दहरूलाई गलत तरिकाले बुझ्छन्‌: “सबै कुराको लागि समय छ . . . जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय।” प्रत्येक मानिसको आयु परमेश्वरले तोकिसक्नुभएको छ भन्ने तिनीहरू सोच्छन्‌। (उपदेशक ३:१, २) तर यस विवरणले वास्तवमा मानिसहरू जन्मने र मर्ने स्वाभाविक प्रक्रियालाई बुझाउन खोजेको हो। हाम्रो व्यक्तिगत निर्णयले पनि हाम्रो आयुलाई असर गर्छ भनेर परमेश्वरको वचन बताउँछ। उदाहरणको लागि, बाइबलमा यसो भनिएको छ: “परमप्रभुको डरले मानिस दीर्घायु हुन्छ।” (हितोपदेश १०:२७; भजन ९०:१०; यशैया ५५:३) कसरी? जस्तै: परमेश्वरले दिनुभएको सल्लाह पालन गर्ने मानिस अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने, पियक्कड हुनेजस्ता हानिकारक कुराहरूबाट अलग्गै बस्छ।—१ कोरिन्थी ६:९, १०.
कोहीचाहिं बाइबलका यी शब्दहरूलाई शाब्दिक अर्थमा लिन्छन्‌, “आकाश र पृथ्वीलाई आगोको निम्ति साँचिएको छ।” (२ पत्रुस ३:७) परमेश्वरले पृथ्वीलाई नाश गर्नुहुनेछ भनी उनीहरू सोच्छन्‌। तर परमेश्वरले पृथ्वीलाई कहिल्यै नाश नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले “त्यो कहिल्यै नडग्मगाओस् भनेर . . . पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो।” (भजन १०४:५; यशैया ४५:१८) पृथ्वी होइन बरु यस भ्रष्ट मानव समाजचाहिं आगोले नाश गरेझैं सदाको लागि नाश गरिनेछ। अनि आकाशको कुरा गर्नुपर्दा, आकाशले साँच्चैको आकाश अनि परमेश्वर बास बस्नुहुने स्वर्ग दुवैलाई बुझाउँछ। यी दुवै नाश हुनेछैन।
कसै-कसैले बाइबललाई किन गलत तरिकामा बुझेका छन्‌?
यी उदाहरणहरूलाई विचार गर्ने हो भने मानिसहरू कुनै-कुनै बाइबल विवरणलाई गलत तरिकामा बुझ्दा रहेछन्‌ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कसै-कसैले यसो भन्लान्‌: ‘यदि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाह छ भने सबै मानिसले स्पष्ट बुझ्ने किताब दिनुभएको भए भइहाल्थ्यो नि? उहाँले किन यसो नगर्नुभएको?’ बाइबलमा लेखिएका कुराबारे मानिसहरूको बुझाइ गलत हुनुको तीन वटा कारण विचार गरौं:
१. बाइबल नम्र र सिक्न इच्छुक मानिसहरूले बुझून्‌ भनी तयार गरिएको हो। येशूले आफ्नो बुबा यहोवा परमेश्वरलाई यसो भनेर बिन्ती गर्नुभयो: “हे बुबा, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, सबैको अगाडि म तपाईंको प्रशंसा गर्छु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवीहरूबाट होसियारीसाथ लुकाउनुभएको छ तर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ।” (लूका १०:२१) बाइबल सही मनोवृत्ति भएकाहरूले मात्र बुझ्न सक्ने तरिकामा लेखिएको छ। “बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवी” भनाउँदा घमन्डी मानिसहरूले बाइबलको कुरा बुझ्न सक्दैनन्‌। तर ‘बालकहरूको’ जस्तै मनोवृत्ति राख्दै नम्र र सिक्न इच्छुक हुनेहरूले निश्चय बुझ्नेछन्‌। परमेश्वरले बाइबललाई कस्तो बुद्धिमानी तरिकामा तयार गर्नुभएको रहेछ, होइन र?
२. बाइबलको कुरा बुझ्न परमेश्वरको मदत चाहनेहरूको लागि बाइबल लेखिएको हो। येशूले सिकाउनुभएको कुरा राम्ररी बुझ्न मानिसहरूलाई मदत चाहिन्छ भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तिनीहरूले कसरी मदत पाउने थिए? येशूले यसो भन्नुभयो: “बुबाले मेरो नाममा पठाउनुहुने मदतगार अर्थात्‌ पवित्र शक्तिले तिमीहरूलाई बाँकी अरू कुरा सिकाउनेछ।” (यूहन्ना १४:२६) मानिसहरूले बाइबलमा पढेका कुरालाई स्पष्ट बुझ्न सकून्‌ भनेर परमेश्वरले आफ्नो सक्रिय शक्ति अर्थात्‌ पवित्र शक्ति दिनुहुन्छ। तर उहाँमा भर नपर्नेहरूलाई परमेश्वर आफ्नो पवित्रशक्ति दिनुहुन्न। त्यसैले तिनीहरूले बाइबलको कुरा बुझ्न सक्दैनन्‌। साथै बाइबलको राम्रो ज्ञान भएका ख्रीष्टियनहरूलाई पवित्र शक्तिले सिक्न इच्छुक मानिसहरूतर्फ डोऱ्याउँछ।—प्रेषित ८:२६-३५.
३. मानिसहरूले बाइबलका कतिपय कुराहरू उपयुक्त समय आएपछि मात्र बुझ्न सक्छन्‌। उदाहरणको लागि, भविष्यवक्ता दानियललाई भविष्यमा हुने कुराहरू लेख्न लगाइयो। स्वर्गदूतले तिनलाई यसो भने: “हे दानियल, यस चर्मपत्रका मुट्ठाका वचनहरू अन्तको समयसम्म बन्द गरी मोहोर लगाएर राख।” वर्षौंदेखि मानिसहरूले दानियलको किताब पढे तापनि स्पष्ट बुझ्न सकेका थिएनन्‌। वास्तवमा दानियलले लेखेका कतिपय कुराहरू तिनी आफैले पनि बुझेका थिएनन्‌। तिनले नम्र भई यसो भने: “मैले सुन्न त सुनें तर बुझिनँ।” मानिसहरूले दानियलले लेखेको कुरा परमेश्वरले तोक्नुभएको उपयुक्त समय आएपछि मात्र बुझ्ने थिए। स्वर्गदूतले यसो भने: “हे दानियल, तिम्रो आफ्नो बाटो लाग, किनभने यी वचनहरू अन्तको समयसम्मको लागि बन्द गरी मोहोर लगाइएका छन्‌।” त्यसोभए कसले बुझ्नेछन्‌? “दुष्टहरूमध्ये कसैले पनि बुझ्नेछैन, तर बुद्धिमान्‌हरूले बुझ्नेछन्‌।” (दानियल १२:४, ८-१०, NRV) त्यसैले उपयुक्त समय नआउन्जेल परमेश्वरले बाइबलका कतिपय कुराहरूको अर्थ खोल्नु हुन्न।
यहोवाका साक्षीहरूले पनि कुनै समय बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई गलत तरिकाले बुझेका छन्‌? छन्‌। तर परमेश्वरले त्यस विषयलाई स्पष्ट पार्ने समय आएपछि तिनीहरूले आफ्नो बुझाइमा छाँटकाँट गरे। तिनीहरूले येशूका चेलाहरूको अनुकरण गरे। येशूले सुधार्नुहुँदा ती चेलाहरूले नम्र हुँदै आफ्नो सोचाइ छाँटकाँट गरेका थिए।—प्रेषित १:६, ७.
बादल कसरी बन्यो भन्ने विषयमा एउटी सानी केटीको बुझाइलाई त्यति गम्भीर गल्ती भन्न नमिल्ला। तर बाइबलले सिकाउने कुरा निकै गम्भीर विषय हो। यसमा पाइने सन्देश निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसमा लेखिएका कुराहरू राम्ररी बुझ्न एक्लैले बाइबल पढ्‌नुको सट्टा अरूको मदत खोज्नुहोस्। त्यसैले ती मानिसहरूसित मदत माग्नुहोस् जसले नम्र भई बाइबल अध्ययन गरिरहेका छन्‌, बाइबलको कुरा बुझ्न परमेश्वरको पवित्र शक्तिको मदत खोजिरहेका छन्‌ र परमेश्वरले उहाँको वचन बाइबललाई राम्ररी बुझोस् भनेर इच्छा गर्नुभएको समयमा हामी बाँचिरहेका छौं भन्ने कुरामा पक्का भएका छन्‌। यहोवाका साक्षीहरूसित मदत लिन वा jw.org वेबसाइटमा तिनीहरूले गहिरो अनुसन्धान गरेर राखेका सामग्रीहरू पढ्‌न नहिचकिचाउनुहोस्। बाइबलमा यस्तो प्रतिज्ञा गरिएको छ: “तैंले विवेक माग्छस् भने . . . परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्।”—हितोपदेश २:३-५.
आपसमा बाझिएजस्तो देखिने बाइबल विवरण र ती विवरणहरूको अर्थ स्पष्ट पार्ने सिद्धान्तहरू जाँच्नुहोस्‌